Ishwor Dulal – osnepal tv
न,र्स काण्ड – तात्ने औषधी भन्दै ३ महिने सु,ई हान्दे पछी भयो यस्तो, (नेपाली कमेडी भिडियो हेर्नुहोला..!)
एम.आर. क्रेजीको भाग ३ सर्बजनिक भएको छ । भिडियोमा समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सानो सानो कुराहरु जुन तपाईहरुले भुल्दै जानु भएको छ त्यस्ता कुराहरुलाइ लिएर बनाइएको तलको भिडियोले तपाईहरुलाई भरपुर मनोरंजन दिने छ । मनोरन्जनका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका भिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो । यसमा अभिनय […] More
March 27, 2020, 8:36 am
‘मेरो साथी हैन ?’ नेपाली कमेडी भिडियो ‘बाठो मान्छे’को भाग ५, (भिडियो सहित्)
नेपाली कमेडी भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । भिभिन्न बिसयमा समाबेश गरि मनिषहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । हास्नु स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सानो सानो कुराहरु जुन तपाईहरुले भुल्दै जानु भएको छ त्यस्ता कुराहरुलाइ […] More
‘स्त्रि’ नेपाली कमेडी भिडियो ओ माई गड भाग -३ (भिडियो हेर्नुहोस् )
March 23, 2020, 3:13 am
नेपाली कमेडी भिडियो ‘उई उई’ हेर्नुहोस् मनोरंजन लिदै पेट मिची-मिची हास्नुहोस् (भिडियो सहित्)
March 22, 2020, 6:19 am
गर्दा गर्दा बसेको बानी ‘बाठो मान्छे’ भाग- ३, हेर्नुहोस भर पुर मनोरंजन लिनुहोस् (भिडियो सहित)
घर आउने भए छाता लिएर मात्र आउ नत्र न आउ, ‘बाठो मान्छे’ भाग – २ (नेपाली कमेडी भिडियो)
आईफोन भर्सेस नोकिया फोन ‘नो टेन्सन’ भाग -२ (नेपाली कमेडी भिडियो हेर्नुहोला..!)
‘उई उई’ नेपाली कमेडी भिडियो हेर्नुहोस् पेट मिची-मिची हास्नुहोस् (भिडियो)
March 20, 2020, 4:08 am
नो टेन्सन भाग १ हेर्नुहोस् पेट मिची- मिची हास्नुहोस, पहिलो चोटी ससुराली जादा भयो यस्तो, नेपाली कमेडी भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
March 18, 2020, 6:49 am
ओ माई गड, केटि पट्याउने उपाय यस्तो पो ! नेपाली कमेडी भिडियो हेर्नुहोस् (भिडियो)
मात्रिका पौडेलको निर्देशनमा बनेको नेपाली संक्षिप्त टेलिसिरियल ओ माई गडको भाग १ युटुब मार्फत सार्वजनिक भएको छ। युटुब च्यानल राष्ट्रियता टिभी बाट यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। यसका निर्देशक मात्रिका पौडेल हुन भने सहायक निर्देशक ईस्वर दुलाल हुन्। यसलाई पूर्वकै एकदम सफल छोटो टेलिचलचित्र मानिएको छ । दर्शकहरुको मनोरन्जनको लागि युट्युब च्यानल राष्ट्रियता टिभीले बिभिन्न प्रकारका […] More
March 17, 2020, 7:51 am
औतारीको बुडी उकालो चडदै,ओराली झर्दै, नेपली कमेडी सिरियल खसखस भाग-९ हेर्नुहोस्, पेट मिचि- मिचि हनुहोस् (भिडियो सहित्)
काठमाण्डौँ- नेपाली भिडियोहरुको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । भिभिन्न बिसयमा समाबेश गरि मनिषहरुलाई मनोरंन्जन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ प्रस्तुत गरिएको यो भिडीयोले दर्सकहरुलाई मनेरन्जन दिने प्रयास गरेको छ । सानो सानो कुराहरुलाई समाबेस गरी तयारपारीएको यो हास्य ब्याङ्गय टेलिश्रृंखला ‘खस खस’को भाग – […] More
March 14, 2020, 6:39 am
‘बुलेट नानी भर्सेस् माल दाई एमआर क्रेजी भाग ११, नेपाली कमेडी भिडियो हेर्नुहोला..!
काठमाण्डौँ- नेपाली कमेडी भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । भिभिन्न बिसयमा समाबेश गरि मनिषहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । हास्नु स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सानो सानो कुराहरु जुन तपाईहरुले भुल्दै जानु भएको छ त्यस्ता […] More